Mayelana NATHI | I-Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd.
I-Xiamen Melody Art & Craft Co., Ltd. kuyinto umphakeli ehamba phambili wahlanganyela Christmas umhlobiso emasimini iminyaka engaphezu kwengu-10, okuyinto has kungcono ifektri siqu elise Xiamen City, Isifundazwe Fujian China.
Imakethe yethu eyinhloko yiNyakatho Melika, iNtshonalanga Yurophu, i-Southeast Asia, iRussia ne-Australia.
Amalungu eqembu lethu lochwepheshe anokuhlangenwe nakho okucebile kusuka ekwakhiweni komkhiqizo nasekukhiqizwenileni ukuletha.
Uhlelo lwethu inkambiso kuqala, futhi ikhwalithi kuqala.
Sizuze iBSCI Audit yefektri yethu, futhi yonke imikhiqizo izoqinisekiswa namakhasimende ngaphambi kokukhiqiza, zonke izinyathelo zokukhiqiza zilandelwa ngokuqinile ngamazinga, nokuhlolwa okugcwele ngaphambi kokupakisha.
Yonke imikhiqizo izodluliselwa ekuhlolweni kwekhwalithi, izitifiketi ezihlobene nemibiko yokuhlolwa izonikezwa.
Amandla ethu okuthuthuka okuthuthuka kwemikhiqizo asuselwa kubakhi bethu abahle kakhulu kanye nezinduku ezingaphezu kuka-100 eziqeqeshwe kahle; sakha izinto ezintsha ngokuya ngamathrendi emakethe njalo ngekota, futhi amaqoqo abanzi ayatholakala ngezinketho zakho.
Sihlanganyele emibonisweni eminingi ekhaya futhi sangena unyaka nonyaka, ungathola imibono eminingi ethrendayo nathi.
Sebenza nathi, uzoyithokozela i-ONE-STOP Ukuthenga isevisi ngathi.
Uyawina futhi siyanqoba isiqubulo sethu
Uyemukelwa ukuxhumana nathi, futhi sibheke phambili ekuvakasheni kwakho nakwimigomo emide ebambisana nobudlelwano nathi.